Kuboshwe owesilisa ngokubulawa kowesifazane nengane | News24
Kuboshwe owesilisa ngokubulawa kowesifazane nengane
Cape Town – Kuboshwe owesilisa oneminyaka engu-35 ubudala eBellville, eKapa ngokubulawa kowesifazane osemncane kanye nendodakazi yakhe e-Atlantis, kuqinisekisa uLieutenant Colonel Andre Traut ngoLwesine ebusuku.
UTraut uthe umsolwa uzovela eNkantolo yeMantshi yase-Atlantis ngamacala amabili okubulala.
Isidumbu sowesifazane oneminyaka engu-23 ubudala, u-Octavia de Bruin, nesendodakazi yakhe eneminyaka emibili ubudala, uCleo, zitholakale ngoLwesibili ehlathini elisendaweni, amakhanda azo egqitshwe ngesihlabathi.
OLUNYE UDABA: Usenkantolo ' owathumba' ayemsola ngokujola nentombi yakhe
Babegcine ukubonakala ngempelasonto beya e-salon.
“Sizolwisana nobugebengu obubhekiswe kwabesifazane nezingane ngakho konke esinakho futhi sizokwenza konke okusemandleni ukuqinisekisa ukuthi izigebengu zibhekana namacala azo enkantolo,” kusho uTraut esitatimendeni.